Dhibaatada uu leeyahay Paracetamol-ka - BBC News Somali
Dhibaatada uu leeyahay Paracetamol-ka
21 Maajo 2015
Saynisyahannada Jaamacadda Edinburgh ayaa ogaaday in xanuun baabbi'iyaha uu kala joojinayo hormoonka taranka raganimo marka la qaato todobo maalmood.
Adeegga caafimaadka UK (NHS) ayaa ku talisa in haweenka uurka leh ay qaataan oo kaliya Paracetamol-ka marka ay tahay lagamamaarmaan, iyadoo waqtiga ugu yar la qaadanayo. Qof kasta ee u baahan daaweyn muddo dheer waa inuu talo caafimaad helaa.
Hay'adda UK ee la socota qeynuunka daawada iyo caafimaadka ayaa sheegtay in Paracetamol-ka uu ka mid yahay xanuun baabbi'yayaasha tirada yar oo badi loo arko ammaan marka ay hooyooyinku qaataan.
Tusaale ahaan, baaris ay sameeyeen Danishka ayaa lagu ogaaday in haweenka qaata xanuun baabbi'yahaya ay ad ugu dhow yihiin inay dhalaan wiilal xaniinyahoodu uu kor jiro, waxayna taasi keeni kartaa dhibaatooyin mustaqbalka oo la xiriira taranka.
Si loo ogaado waxa ka dambeeya xiriirkan ayey Saynisyahannada sameeyeen qaab aad ugu dhow xaaladaha uurka bani'aadamka. Jiir ayaa lagu beeray minka bani'aadamka kaddibna todobo maalmood ayaa la siiyay Paracetamol. Aad ayuu hoos ugu dhacay hormoonkiisa raganimo marka loo fiiriyo kuwa la siiyay daawada beenta ah, balse markii ay maalin qaateen ayeysan saameyn ku yeelan.
Baarayaasha ayaa taxadar ka muujinaya inay weli deg deg tahay in la sheego xadka baarista la helay iyo sida bani'aadamka loogu adeegsan karo, balse waxay ay tahay muhiimadda in baaris lagu sameeyo haweenka uurka leh aysan suurgal aheyn.
Baarista ayaa lagu daabacay wargeyska 'Science Translational Medicine'.